Dhimma godaantotaarratti dimookraatonni walii galle jedhanis Traamp lakki jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Dhimma godaantotaarratti dimookraatonni walii galle jedhanis Traamp lakki jedhan
Sagantaa 'Daca' haqaanis dargaggoota kanaaf jaalala guddaa akka qaban Pireezidant Tiraamp dubbatan
Qondaaltonni paartii diimokiraat lama, Pireezidant Tiraamp waliin dargaggootni ragaa malee gara Ameerikaa dhufan qondaalonni biyyattii 'Dreamers' jedhanii waaman gara biyya isaaniitti dirqiin akka hin deebifamne gochuuf walii galleerra jedhan.
Naansii Peelosii fi Chack Shumer akka jedhanitti, dhimma nageenya daangaa irrattis waliigalaniiru garuu, waliigaltichi ijaarsa dallaa daangaa Ameerikaa fi Meksiikoo jidduu hin dabalatu.
Waayit Hawus ammoo waliigaltichi dhimma dallaa kanaa hin dabalatu kan jedhu haalee jira.
Pireezidant Tiraamp sagantaa 'Daca' jedhamu daa'immanii fi dargaggootni seeraan ala gara Ameerikaa dhufan dirqiin gara dhufanitti akka hin deebine gochuuf bara aangoo Pireezidantii duraanii Baaraak Obaamaa hojiirra oole haqanii turan.
Sagantaan kun namootni kuma 800 ta'an seeraan ala Ameerikaa keessa jiran hayyama yeroo hojii fi barnootaa akka argatan kan gargaare ture.
Pireezidant Tiraamp wayita sagantaa kana haqan, koongiransiin karoora biraa sagantaa kana bakka bu'uu danda'u akka qopheessu baatii jaha kennanii turan.
Chack Shumer (kan dubbataa jiru) and Nansii Pelosi (bitaa) sagantaan 'Daca' akka hin haqamne mormaa turan
Dimookiraatonni seera ijaarsa dallaa Meeksikootiif fandiin akka taasifamu bahu kamiyyuu akka morman irra deddeebiin ibsaa turan. Kun ammoo dhimma ijoo Pireezidant Donald Tiraamp ture dha.
"Sagantaa 'Daca' fi dhimma daangaa iratti mari'atameera, dhimma ijaarsa dallaa Meeksiikoo hin dabalatu kan jedhu garuu waliigaltee keessa hin jiru," jechuun dubbi himtuun Waayit Hawus Saaraa Saanders Tiwutarii irratti barreessaniiru.
Shumer wayita kanaaf deebii kennan, "Pireezidant Tiraamp dhimma ijaarsa dallaa Meksiikoo ifatti akka itti fufan himaniiru, garuu qaama waliigaltee keenyaa miti," jedhan.
Boodarra garuu pirezidaantiin Amerikaa Donaald Traamp twitter isaanii irratti akka barreessanitti, ''godaantota irratti haa walii galluuf dursa daangaarratti walii galteen nageenyaa jiraachuu qaba.''
Mana maree fi seneetii biyyattii keessatti harka caalmaa kan qaban deeggarsi Riippabliikaanotaa dhimma godaantotaa irratti murtee darbu kamiifuu ni barbaachisa.
Torbee darbe, dhimma liqaa fi baajataa irratti dimookiraatota waliin walii galuun Pireezidant Tiraamp Riippabliikaanota rifachiisee ture.
Barruun The Economist gaazexeessaan isaa Itoophiyaatii ari'atamuu balaaleeffate
Waa'ee seenaa Raadiyoo Harar kan dhiheenya deebi'ee baname duubaa hangam beekna?
Finlaandiifi Siwiidiin NATOtti makamna jedhan